Tababare Jurgen Klopp oo ka hadlay guushii ay ka gaareen kooxda Southampton – Gool FM
(Liverpool) 01 Feb 2020. Macalinka kooxda kubadda cagta Liverpool ee Jürgen Klopp ayaa ka hadlay dareenkiisa kaga aadan guushii weyneyd ay ka gaareen naadiga Southampton.
Liverpool ayaa guul muhiim ah kaga gaartay kooxda Southampton garoonka Anfield, kaddib markii ay kaga adkaatay 4-0, ciyaar ka tirsaneyd kulamada 25-aad ee horyaalka Premier League.
Ciyaarta kaddib macalin Jürgen Klopp ayaa wuxuu warbaahinta kala hadlay dareenkiisa kaga aadan guushan ay gaartay kooxdiisa Liverpool wuxuuna yiri:
“Qeybta hore ee ciyaarta waxaan jecleystay waxqabadka kooxda Southampton, Wooow! Alla maxay koox tahay!, waxaan aqoon u leeyahay kubbadda cagta, laakiin noloshayda waligey maan arkin isbadal weyn oo hal ciyaar ah, sida maanta dhacday”.
“Qaabka ay u ciyaartay kooxda Southampton waxay nagu abuurtay dhibaatooyin joogta ah, qaab difaacashadooda aad ayey u fiicneyd sidoo kale”.
“Waxaan sameynay labo ama sedex isbedel inta u dhaxeysa labada qeyb ee ciyaarta, waxa ugu muhimsan ayaa aheyd inaan isbedel ku sameyno doorka Fabinho kaddibna si toos ah ayaan u soconay”.
“Arrinta layaabka leh ayaa waxay tahay in Southampton ay heysatay fursado badan ay ku guuleysan kartay, sababtoo ah dhowr fursadood ayey iska khasaariyeen”.
Intaas kaddib Jürgen Klopp ayaa wax laga weydiiyay in farqiga u dhexeeya iyaga iyo Man City uu haatan gaaray 22 dhibcood wuxuuna ku jawaabay:
“Farqiga waa mid aad u weyn, haa, tanina waa wax aad u yaab badan, laakiin waxaan ciyaarnay kulamo aad u adag, kooxaha naga soo horjeeday dhamaantood inooma wajihin inaan la dabaal-degno, balse waxay inoo wajaheen si ay nooga guuleystaan oo ay noo dhibaateeyaan, balse arrintaas waxba uma aragno”.
“Waxaan wali ka fognahay dhameystirka kubadda, sidaas darteed waa inaan si joogta ah horumar u sameynaa, haatan dhamaan ciyaartoydii kooxda koowaad waxay fasax ku baxayaan toddobaad dhan, laakiin waxay tababarka ku sameyn doonaan meelo kala duwan, waxayna sameyn doonaan waxa ay marwalba sameyn jireen, laakiin si kali ah”.
Horudhac: Burnley vs Arsenal… (Kooxaha isku dhibcaha ah ee Clarets iyo Gunners oo galabta ku wada ciyaaraya garoonka Turf Moor)